कलैया–बरियारपुर सडक खण्डमा दुर्घट्नाका घटना बढ्दै - Sajhedari Daily
कलैया–बरियारपुर सडक खण्डमा दुर्घट्नाका घटना बढ्दै
जिल्लाको कलैया– बरियारपुर सडक खण्डमा दुर्घट्ना बढ्दै गैरहेको छ ।
उक्त सडकमा केही महिना यता दैनिक जसो दुर्घटना हुने गरेको छ । सो सडक खण्डमा सोमवार विहान करिब २ बजेको समयमा कलैयाबाट बरियारपुर तर्फ जाँदै गरेको ना. ४ च. ५८८९ नम्बरको पिक अप भ्यान कलैया उमनपा वडा नं.९ रामपुर चौकभन्दा करिब ५० मिटर अगाडि विजुलीको पोलमा ठोकिएर दुर्घट्ना भएको छ।
तीब्र गतिमा आएको पिक अप भ्यान अनियन्त्रित भै ठोकिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएकोे छ । घट्नाबाट भएको तिको विवरण यकिन हुन सकेको छैन। तर ठक्करबाट बिजुलीको पोल भाँचिनुको साथै विद्युत् पनि अवरोध भएको छ।भ्यानका चालक फरार रहेका कारण दुर्घटनाको यकिन कारण थाहा हुन नसकेको स्थानीयहरुले बताएका छन ।
यसैगरी केही दिन अगाडि कलैया उमनपा वडा नं. ६ स्थित हनुमान मन्दिर चौकको सोहि सडक खण्डमा एउटा अटो रिक्साले एक जना साईकल यात्रीलाई ठक्कर दिदा उनको उपचारको क्रममा आईतवार बेलुका अस्पतालमा नै निधन भएको थियो।
सडक निर्माण भएसंगै तीब्र गतिमा सवारी साधन चालउने कारण सडक खण्डमा दुर्घटना बढ्दै गईरहेको हो ।